समे फल्चालाई खाल्डो भन्दै एभिन्युज टेलिभिजनले झूटो रिपोर्ट बजाउँदा ललितपुरबासी आक्रोशित ! | Diyopost - ओझेलको खबर समे फल्चालाई खाल्डो भन्दै एभिन्युज टेलिभिजनले झूटो रिपोर्ट बजाउँदा ललितपुरबासी आक्रोशित ! | Diyopost - ओझेलको खबर
समे फल्चालाई खाल्डो भन्दै एभिन्युज टेलिभिजनले झूटो रिपोर्ट बजाउँदा ललितपुरबासी आक्रोशित !
दियो पोस्ट मंगलबार, आश्विन ०५, २०७८ | १३:४३:४१
काठमाडौं । सञ्चार माध्यमले खबर प्रकाशन÷प्रशारण गर्दा सत्य तथ्य र वास्तविकतामा आधारित हुनुपर्छ । पाठक, दर्शक तथा स्रोताले सञ्चार माध्यमले प्रशारण गरेको खबरलाई लिएर प्रश्न गर्न पाउनु उनीहरुको अधिकार हो । प्रकाशित सामग्रीले एउटा समुदायको आस्था तथा विश्वासमा घात पुर्यायो भने त्यसले कस्तो रुप लिन सक्ला ?
त्यसमा टेलिभिजनले आफ्नो व्यापारिक स्वार्थका लागि एउटा समुदायको आस्था र सम्पदामाथि नै आक्रमण गर्दा ती समुदायले के– के गर्न सक्छन् ? त्यसको पछिल्लो शिकार बनेको छ– एभिन्युज टेलिभिजन ।
मिडिया एलाइन्स नेपालका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व बरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका भाष्करराज राजकर्णिकारद्वारा सञ्चालित उक्त टेलिभिजनले आफ्नो व्यापारिक स्वार्थका लागि झूटो अफवाह फैलाउँदा ललितपुरको नेवार समुदाय आक्रोशित भएका छन् ।
ललितपुरको पुल्चोकस्थित कित्ता नम्बर ३२७ मा रहेको २ सय वर्ष पुरानो समय फल्चाको पुनर्निर्माण गर्ने ललितपुरबासी नेवार समुदायको कदमको विरोधमा देखिने गरि नै एभिन्युजले रिपोर्ट बजाएको थियो । ललितपुरको थापाथली– कुपण्डोल– जावलाखेल सडक खण्ड अन्तर्गत पुल्चोस्थित श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले २ सय वर्षभन्दा पुरानो समे फल्चाको जमिनमा भवन बनाएको थियो । उक्त भवनको अघिल्लो भाग भत्काएर महानगरपालिकाले २ सय ६ वर्ष पुरानो समे फल्चा निर्माण गर्न बजेट छुट्याएको थियो ।
समे फल्चा निर्माणका लागि समय फल्चा पुनर्निर्माण उपभोक्ता समितिले शिलान्याश कार्यक्रम राखेको थियो । तर, श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले यसअघि सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतलको आदेश र फैसलालाई लुकाएर जिल्ला अदालत ललितपुरमा झूटो निवेदन दायर गरेका थिए । उनको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै ललितुर जिल्ला अदालतले तत्काल फल्चा निर्माण रोक्न आदेश दिएको थियो
। तर, महानगरपालिकाले २०२३ सालमा खिचिएको फोटो सहित सबै प्रमाण अदालतमा बुझाएपछि भण्डारीले झूटो निवेदनका आधारमा अदालतलाई आदेश दिन बाध्य बनाएको भन्दै निर्माण सुचारु गर्न आदेश दिएको थियो ।
ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार निर्माण हुन लागेको समे फल्चाको विषयमा एभिन्युज टेलिभिजनले झूटो रिपोर्ट प्रकाशन गरेको सम्पदा अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ । रिपोर्टमा ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अनदेखा गर्दै ‘मेयरले किन सडकमा खाल्डो खने’ भनेर प्रशारण गरिएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा समेत प्रशारण भएको यो रिपोर्टमा ललितपरबासीले ‘एभिन्युज टेलिभिजनले कति पैसा पाएर यस्तो गलत रिपोर्ट बजायो’ भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
ललितपुबासीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै उनीहरुले टेलिभिजनकै कार्यालयमा गएर घेराबन्दी गरेका थिए । सम्पदा अधिकारकर्मीहरुले टेलिभिजनलाई सम्बोधन गर्दै निवेदन समेत दिएका छन् । ‘एभिन्युज खबरद्वारा हालै उक्त ऐतिहासिक समे फल्चा पुनर्निर्माण महा अभियानमै असर पुग्नसक्ने गरि भ्रमपूर्ण समाचारहरु सम्प्रेषण भइरहेको हुँदा हामी ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौँ,’ एभिन्युज टेलिभिजनमा पठाइएको उजुरीमा भनिएको छ ।
तर, टेलिभिजनले अझैसम्म ललितपुरबासीको भनाईलाई स्थान दिएको छैन ।
किन बज्यो यस्तो झूटो रिपोर्ट ?
२ सय ६ वर्ष पुरानो समे फल्चाको तस्विरसहितको तथ्य, फैसला र प्रमाणसहितका समाचारहरु अन्य सञ्चार माध्यमले प्रकाशन र प्रशारण गरिरहेका छन् । हाल लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी रहेको भवनले ऐतिहासिक फल्चाको भग्नावशेष हडपेको विषय एभिन्युजले बजाएको छैन । सहकारीलाई फाइदा पुग्ने हिसाबले मात्रै यो रिपोर्ट बनाइएको स्पष्ट देखिन्छ । तर, प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको आचार संहितामा ‘पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले कसैलाई लाभ हुने’ हिसाबले खबर प्रकाशन÷प्रशारण गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । काउन्सिलले जारीगरेको आचार संहितालाई नै धज्जी उडाउने गरि एभिन्युज किन लाग्यो होला भन्ने ललितपुरबासीलाई लाग्नु स्वभाविक हो ।
स्रोतका अनुसार एभिन्युज टेलिभिजनका मालिक भाष्करराज राजकर्णिकार मिडियाको आवरणमा घरजग्गा दलालीको धन्दा चलाउँछन् । उनले चितवनमा जग्गा दलाली धन्दा चलाउँदै गरेको प्रमाण कागजात समेत यसअघि दियोपोस्टले प्रकाशन गरेको थियो । उक्त जग्गाकाण्डमा भाष्करबाट ठगिएकाहरु दियोपोस्टको कार्यालयसम्म आएर प्रमाण उपलब्ध गराएका थिए ।
त्यसै आधारमा दियोपोस्टले समाचार प्रकाशन गरेपछि कर्णिकारले समाचार हटाउन दबाव दिएका थिए । तर, समाचार हटाउने उनको प्रयास सफल हुन सकेन । पछिल्लो समय मिडियाको आवरणमा जग्गा दलाली धन्दा चलाउँदै आएका भाष्करको सहयोगी बनेका छन्–श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र भण्डारी । उनै भण्डारीले भाष्करलाई सहकारीबाट मनोमानी हिसाबले रकम दिएको स्रोतले बताएको छ । उक्त रकमको सोझो गर्न कर्णिकारले न्युजरुमलाई यस्तो गलत रिपोर्ट प्रशारण गर्न दबाव दिएको स्रोतको दाबी छ ।
श्री लालीगुराँस भित्रको ठगीबारे दियोपोस्टले यसअघि के–के खुलाशा गरेको थियो ?
मंगलबार, आश्विन ०५, २०७८ | १३:४३:४१